Sodàna Atsimo - Wikipedia
Sainam-pirenen' i Sodàna Atsimo
I Sodàna Atsimo na ny Repoblikan' i Sodàna Atsimo da firenena ao Afrika Atsinanana, manana vekaran-tay lmirefy 619 745 km². I Djouba no renivohiny. Atao hoe Republic of South Sudan izy amin' ny teny anglisy fa République du Soudan du Sud izy amin' ny teny frantsay.
I Sodàna Atsimo ao Afrika
Sarin-tanin' i Sodàna Atsimo
Taorian' ny fitsapan-kevi-bahoaka natao tamin' ny 9-15 Janoary 2011 no nisarahan' i Sodàna Atsimo tamin' ny Repoblikan' i Sodàna tamin' ny 9 Jolay 2011. Taorian' io anefa dia mbola tsy nifanarahan' ny firenena roa tonta ny famaritana ny sisin-tany manasaraka azy ireo. Ny fiteny anglisy no fiteny ôfisialiny.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sodàna_Atsimo&oldid=1040828"